Kn95 inodzivirira mask, N95 inodzivirira mask, Disposable yekurapa masiki - Felix
Kn95 chiChinese chinowanzo mask. Kn95 kufema imhando yemweya wekufema une chembere inochera zvakanaka munyika yedu. Kn95 maski uye N95 masiki ari chaizvo zvakafanana maererano nechinhu futa kutenderera.
Disposable maski inogadzirwa anopfuura matatu matatu e 28g isina-yakarukwa machira; mhino yakagadzirwa neakasikwa inoshamwaridzika epurasitiki yese, isina simbi chero ipi, iine mhepo yekubuda Disposable masks (ekurapa masks ekurapa) anogona kudzivirira kupumha turakiti rekutapukira kune imwe nhanho, uye haigoni kudzivirira haze.
Kambani yedu yakavambwa muna 2005, inyanzvi yeR & D kugadzirwa uye kutengesa kweBhuku raMabhuku, Sticky zvinyorwa, Faera refaira, Hand sanitizer, PU dehwe, PPE zvinhu etc. Industrial Company. Isu tinowanikwa muShenzhen guta rine mukana wekufambisa wakasununguka. Nanhasi, Tine boka revanhu vanopfuura mazana matatu nemakumi emakore ekutengesa kwekunze, Zvigadzirwa zvedu zvinotumirwa kuEurope, South America, Australia, Africa neAsia.
Pasinei neiyo chigadzirwa, isu ticha tanga kubva kubishi rekutenga zvinhu, kuita zvigadzirwa, kuenda kutakura uye kutumira, kuenda kune tsika clearance nekusiya pachiteshi, nhanho yega yega inodzorwa nehunyanzvi, kuona kuti zvinhu zviri mumamiriro akanaka uye kusvika vatengi munguva.
China mhando mask mashekeri mutsigiri